Nekuenderera mberi kwehupenyu hwedu hwazvino, neimwe nzira, mararamiro edu atora hunhu hunokweva. Izvi hazvingori chete mhedzisiro yekuenderera mberi kwekuedza kwedu vanhu veChinese, asiwo mhedzisiro yekuenderera mberi kwesainzi nesainzi. Nekudaro, isu tine dzakasiyana concepts yekuenderera mberi kudikanwa uye kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana Kune mamwe mafungiro akasiyana uye pfungwa yekushandisa yezvinhu zvakanaka. Mumakore achangopfuura, kusimukira kwemaindasitiri yeChina kwave kuchikurumidza, izvo zvakapa mukana wakakura wekuvandudza indasitiri yekugadzira yeChina.
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kweInternet e-commerce, yakaunza chinoshamisa mukushanda kwevagadziri. Pasi pemamiriro ekunze akadaro, kana vagadziri vakada kuchengetedza mukana wavo wekukwikwidza mumatanho-padanho-nhanho, vanofanirwa kuita shanduko muzvikamu zvitatu zvevashandisi, kushambadzira uye manejimendi. Chete nekuramba uchimhanyisa pamwe nekusimudzirwa kwenguva hazvigone kubviswa nemusika.
1. Gadzirisa iyo yemhando yemhando yekutengesa
Kubva pakutengesa zvigadzirwa kuenda kumabasa ekutengesa, kushambadzira nekusimudzira kwakava kushambadzira kweneti uye kushambadzira kwemazwi-pamuromo. Panguva imwecheteyo, iyo yakatsikisa maitiro ekutengesa. Munguva yakapfuura, kubhadhara kwaive kuguma kwekutengesa, uye ikozvino ndiko kutanga kwekutengesa. Nekuti iyo yekubhadhara kumashure haisisiri kungoreva kutengeswa kwechigadzirwa, asi iwe uine ruzivo rwevatengi, iwe unofanirwa kutevedzera ruzivo urwu uye kuramba uchigadzira zviwanikwa.
2. Inovanza manejimendi manejimendi
Munguva yakapfuura, hukuru-hwakakura mabasa, chero bedzi kurongeka kunogona kuwana yakaderera mutengo uye yakakwira goho, asi haigoni kuramba vatengi zvachose. Ino inguva yekuvandudzwa kweInternet uko mitengo iri pachena, inotungamira kumitengo yakakwira uye purofiti yakaderera, uye kushungurudzika kwevagadziri, zvichitungamira kurufu rwekusagadziriswa, uye kutya kwekuvandudzwa. Nzvimbo ekunze inotarisana nevagadziri vehose clamp iri kuwedzera kuve yakaoma, uye kuoma kwekushanda kuri kuwedzera. Iyi nguva yakaoma inoisa yakakwirira kudiwa kushambadzira. Maitiro ekuita zvinodiwa nezvinodiwa neshanduro shanduko nekuvandudza kwevatengesi, pamwe chete nemabatiro evagadziri, hoses clamp vagadziri vanofanirwa kumisikidza pfungwa yeInternet, kuita chirongwa che “kudzikisa mashandiro emari yekushandisa”, nekuvaka chirongwa chakakura chekuongorora kuti uwane nekukurumidza kuchinjika kuchinjika 3. nharaunda Isu zano rinotsigirwa zvakanyanya.
Iwo manejimendi anozotungamira achishingairira uye nekudzora njodzi zvakanyanya.